Chinyorwa Chekusarudza Chinyorwa - Gadzira poto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
RESOURCES / Chinyorwa Chekusarudza Chinyorwa
Heino irwo rwekutungamira runyorwa rwezvinhu zvekusarudzwa, iine rondedzero, hunhu, mashandisiro uye mamwe maiterms sezasi, unogona kuiongorora kune zvese zvakadzama wobva wasarudza akakodzera zvinhu.
Tsananguro: Iyi yepasi-inodhura mainjiniya epurasitiki inopa yakasarudzika mehendi uye yepamusoro simba kune akasiyana zvikamu zvezvikamu zvinoshandiswa mune yakakwira-maitiro ekushandisa.
Hunhu: Pne yeakajairika Prototype CNC michina yekushandisa, Yakagadzirwa zviri nyore, yakashongedzwa uye yakapiswa-kupisa, ABS inogona zvakare kupendwa uye kunamirwa kuti iwedzerwe kuita kwakawanda. Yakanakisa kupisa uye kujeka kugadzikana kunowedzera kugona kwayo kugadzira pre-kugadzirwa ABS machine prototypes.
Mafomu: Zvinhu zveMhuri Zvekare, Matoyi, Zvimotokari Zvikamu, kicheni Midziyo, Zvikamu zveComputer, Zvishandiso zveLabhoritari, Nhare / Fax zvikamu zvemuchina, Magetsi / Magetsi akavharirwa, Ndege uye zvemukati matimu.
Pedzisa Inowanikwa: Muchina Pedza, Smooth Pedza, Sand Blast, Yakapetwa Pedza, Painted kana Grey Primered, Electroplated
Hurukuro: Natural zvakasvibirira zvinhu zvinowanikwa muCream Chena ruvara. Makuru uye akaomarara zvikamu zvine undercuts zvinogona nyore kugadzirwa muzvikamu uye kunamirwa. Mari sarudzo yeiyo prototype CNC machine.
Kushaya simba: Haikodzeri maPetroleum-based maoiri, pendi uye zvinonyungudutsa. Kupisa zvine mwero, mwando nemakemikari, mamiriro ekunze ekurwisa. Inogona kukwenya nyore. Inopisa neakakwira utsi chizvarwa.
GadziraProto mhando dzezvinhu: ABS - Natural ABS - Nhema ABS - Flame Retardant UL-94V0
Kuwandisa (g / cm³): 1.06
Kubvisa Kwemvura (%): 0.25
Tensile Simba (Mpa): 38
Elongation pazororo (%): 35
Izod inokanganisa Simba Notched (J / m): 300
Flexural Simba (MPa): 65
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa ©: 98
Kupisa Kunopisa Temp - 1.8MPa ©: 94
Tsananguro: Isina kuzadzwa PolyCarbonate (PC) yakasimba uye yakasimba, yakajeka huinjiniya thermoplastic inozivikanwa nekukanganisa kwayo kwakawanda, kupisa kwekushisa uye oparesheni yezvinhu.
Hunhu: Yakakwira Impact kuramba, Yakanaka Yekutsiga Kugadzikana, Yakanaka simba chengetedzo kumatunhu akakwira tembiricha, Yakaderera coefficient yekupisa kwekuwedzera, Yakanaka Yakaenzana Kugadzikana. Yakanaka magetsi insulator uye kuva neHairi inodzivirira uye Flame inodzorera zvinhu.
Mafomu: YeMagetsi headlamp Lense uye Yekuchengetedza Nhoo, Midziyo yeUrapa / Hutano, Zvemagetsi Zvishandiso, Kuvaka Indasitiri, Zvemitambo Zvekushandisa, Zvigadzirwa, Casing uye housings, Magetsi / Magetsi zvigadzirwa, Zvinobatanidza, MaCompact Discs, Telecommunication Hardware
Pedzisa Inowanikwa: Muchina Pedzisa, Smooth Finish, Sand Blast, Mirror Polish, Vapor Polish, Translucent pedza (Foggy inoita kunge Lamp Shade), Painted kana Grey Primered
Hurukuro: Kazhinji zvikamu zvine translucent tarisa kumumvuri CNC michina asi kujeka kunogona kuwanikwa nekukwirisa kwazvo. Isimba, mukurumari, kusagadzikana kwekukanganisa uye kujekesa kunoita kuti ive chinhu chakanakira kumwe kunyorera maitiro. Makuru uye akaomarara zvikamu zvine undercuts zvinogona kuitwa muzvikamu uye kunamirwa.
Kushaya simba: Zvichienderana nekutsemuka nekuda kwekushushikana, Kurwisa zvine mwero Makemikari, Yakadzika kukwenya-kuramba.
GadziraProto mhando dzezvinhu: PC - Bvisa PC - Nhema PC 20% GF - Nhema
Kuwandisa (g / cm³): 1.2
Kubvisa Mvura (%): 0.15
Tensile Simba (Mpa): 64
Elongation pazororo (%): 75
Izod inokanganisa Simba Notched (J / m): 750
Flexural Simba (MPa): 95
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa ©: 138
Kupisa Kunopisa Temp - 1.8MPa ©: 130
Tsananguro: Iyo inozivikanwawo se PMMA (PolyMethyl-MetaAcrylate) ndeye amorphous thermoplastic zvinhu zvine yakanaka kwazvo oparesheni. Acrylic inowanzo shandiswa segirazi rinotsiva. Acrylic
Hunhu: Kwakanaka kujekesa kujekesa, Kwakanaka Abrasion Kuramba, Kwakanaka kugadzikana kwezvakatipoteredza, Kwakanaka kupisa Kuramba, Kwakanaka Chemical Kuramba. Inopisa asi yakadzika hutsi hunobuda.
Mafomu: Zvifukidzo zvemwenje zveMotokari, Rongedzi dzemwenje, Bvisa Mabhodhoro uye Midziyo yeContainer, Lenses, Shop-fittings, Ndege glazing, Ruzivo maratidziro emakesi, Zviratidzo, Midziyo, Yemazuva ano fenicha, Zvishongo zvezvishongo, Medical / Hutano Zvikumbiro. PMMA ine dhigirii yakanaka yekuenderana nehunhu hwevanhu.
Pedzisa Inowanikwa: Muchina Pedza, Smooth Kupedza, Mirror ChiPolish, Flame ChiPolish, Translucent Kupedza, Painted kana Tinted pedzisa
Hurukuro: PMMA ndeimwe yehupfumi CNC Machining Material imwe nzira yePolycarbonate (PC) kana simba rakanyanya risingadiwe. Kazhinji mazita ekutengesa eAcrylic anosanganisira Plexiglas, Lucite uye Perspex. Zvikamu zvakakura uye zvakaoma zvinogona kunamirwa nyore.
Kushaya simba: Kusagadzikana kusagadzikana, Zvichienderana nekushushikana kwekushushikana, Haikodzeri kushandiswa nema chlorine kana anonhuwirira mahydrocarbon. Brittle hunhu, PMMA inozvimba uye inonyungudika mune akawanda manyoro solvents.
GadziraProto mhando dzezvinhu: PMMA - Bvisa PMMA - Nhema
Kuwedzera (g / cm³): 1.18
Kubvisa Mvura (%): 0.4
Tensile Simba (Mpa): 70
Elongation pazororo (%): 10
Izod inokanganisa Simba Notched (J / m): 22
Flexural Simba (MPa): 96
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa ©: 110
Kupisa Kunopisa Temp - 1.8MPa ©: 95
Tsananguro: Acetal inozivikanwawo sePOM (PolyOxyMethylene) inyanzvi Thermoplastic inowanzoshandiswa kunyatsogadzirisa zvinhu zvinoda kuomarara kwakanyanya, kukakavara kwakadzika uye kugadzikana kwepamamiriro.
Hunhu: Kwakanaka abrasion inodzivirira Yakanaka kushanda tembiricha, Glossy chitarisiko, Kwakanaka mukurumari Kuzvigadzira mafuta Kugwinya kuomarara, simba & Kuomarara. Wide renji Kemikari kuramba (kusanganisira akawanda manyoro). Kwakanaka Magetsi uye Dielectric zvivakwa.
Mafomu: Magiya, mabheyaringi, Screws, Pump zvikamu, Zvikamu zvemagetsi, Insulators, Medical zvikamu, Furniture Hardware, Valve miviri, Zippers, Underwater mafomu.
Pedzisa Inowanikwa: Machine kupera, Smooth Finish, Sand Blast, Polished pedza
Hurukuro: Nyore kumuchina asi zvakaoma kwazvo kusunga. Chitarisiko chakanaka ne gloss kupera. Acetals inowanzo kukwikwidzana neNylon kune akawanda mafomu akafanana asi akasimba zvine mutsindo kupfuura Nylon pasi pemamiriro akanyorova uye akanyorova.
Kushaya simba: Zvakanyanya kuoma kusunga, Kusagadzikana kusagadzikana neasidhi, Inopisa uye Yakanyanya Kukosha Kukosha. Zvakaoma kupenda. Makuru uye matete mativi ane asina kujairika madziro chikamu anowanzo tenderwa ne warpage.
GadziraProto's mhando dzezvinhu: Acetal - Natural (Chena) Acetal - Dema
Kuwedzera (g / cm³): 1.41
Kubvisa Mvura (%): 0.27
Tensile Simba (Mpa): 67
Elongation pazororo (%): 40
Izod inokanganisa Simba Notched (J / m): 100
Flexural Simba (MPa): 87
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa ©: 165
Kupisa Kunopisa Temp - 1.8MPa ©: 125
Tsananguro: Nylon izita rakajairika remhuri yemapolymes ekugadzira anozivikanwa sePA PolyAmides. Nylon (Polyamides) inoumba mhuri hombe yeinjiniya mapurasitiki ane akasiyana siyana mafomu. Nyloni kazhinji dzakasimba, dzakaomarara uye dzakapfeka dzinodzivirira.
Hunhu: Yakanakisa abrasion kuramba, Kukwirira kwakakwirira, Kwakanaka kuramba mafuta, maoiri uye zvinonyungudutsa asi zvinokanganiswa neacids uye yakasimba mabheseni. Hwakasimba Hwakasimba, Yakakwira Tensile Simba, Yakakwira Impact Kuramba, Yakanaka yeDimensional Kugadzikana.
Mafomu: Yakanakira kupfeka kunyorera seBearings uye maGiya, Sporting Zvigadzirwa, Fishing mutsetse, ZveMota Zvikamu, Matangi, Injini dzezvikamu, Simba Zvishandiso, Zvekudya Zvakawanda.
Pedzisa Inowanikwa: Machine Pedza, Smooth Pedza, Sand Blast.
Mashoko: Nylon inowanzo shandiswa mumachira, mota, kapeti uye zvipfeko zvemitambo nekuda kwekugara kwavo kwakasimba uye simba. Nylon ine nani kupfeka-kuramba kupfuura Acetal, asi haina hunyoro kusagadzikana izvo zvinoita kuti ive isina kukodzera kune yakakwira-mwando.
Kushaya simba: Kukwirira kwakanyanya kunyorovesa kusvibisa magetsi nemagetsi. Yakarwiswa neakasimba Acids, Mabhesi, Oxidizing vamiririri. Yakakwira Notch senzwi.
GadziraProto mhando dzezvinhu: Nylon 6/6 - Yemhando (Yachena) Nylon 6/6 30% GF - Nhema
Kuwandisa (g / cm³): 1.14
Kubvisa Mvura (%): 1.9
Tensile Simba (Mpa): 75
Elongation pazororo (%): 90
Flexural Simba (MPa): 80
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa ©: 200
Kupisa Kunopisa Temp - 1.8MPa ©: 90
Tsananguro: PolyPropylene iri semi-opaque thermoplastic inoshandiswa zvakanyanya mukushandisa kwakasiyana siyana. Polypropylene ine kumira kwakanaka kune kuneta. PP inopa mubatanidzwa wezvakanaka zvemuviri, zvemakemikari, zvemakanika, zvinopisa uye zvemagetsi zvivakwa.
Hunhu: Kwakanaka kwazvo kuramba kuneta. Chirema chine musanganiswa wakanaka wekuomarara uye kushanduka. Inodzivisa alkaline yakawanda uye Acids. Kunyorova kwakadzika Absorption uye Isiri-Inotyisa. Yakanaka Impact Kuramba. Inochengetedza kuomarara uye kushanduka.
Mafomu: Midziyo yemidziyo, Kudya Kuteedzera, Kurapa neLabhoritari kunyorera nekuti inogona kumira kupisa muacoclave, Pump Zvikamu, Casings neHupenyu Hinji, Zvimotokari zvikamu, Zvekudya Midziyo, Maindasitiri Zvishandiso, Loudspeaker drive zvikamu, Mhuri Midziyo.
Hurukuro: Polypropylene ndeimwe yemapurasitiki akareruka aripo. Zviri nyore kumuchina uye zvinopa kumeso kupera. Sezvo PP inopesana nekuneta, inoita kuti ive yakakodzera kune mazhinji epurasitiki anogara akasendamira zvikamu, senge pafiripi-yepamusoro mabhodhoro emabhodhoro.
Kushaya simba: Zvakaoma Glue. Yakadzikiswa nemwaranzi yeUV, Yakarwiswa nema chlorine solvents uye aromatics. Makuru uye matete madziro akapatsanurwa zvikamu anowanzo deformation kana warpage mushure mekugadzira.
GadziraProto mhando dzezvinhu: PP - Natural PP - Nhema PC 20% GF - Nhema
Kuwedzera (g / cm³): 0.9
Kubvisa Kwemvura (%): 0.03
Tensile Simba (Mpa): 33
Elongation pazororo (%): 185
Izod inokanganisa Simba Notched (J / m): 60
Flexural Simba (MPa): 45
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa ©: 100
Kupisa Kunopisa Temp - 1.8MPa ©: 50
Tsananguro: Aluminium ndiyo simbi inoshandiswa zvakanyanya isiri simbi. Aluminium iri yakapfava, Inogara, Yakareruka, Ductile uye Inotakurika simbi ine chitarisiko kubva kuSilvery kusvika kuDrey Grey, zvinoenderana neyakaomarara pamusoro. Aluminium inowanzo gadzira inodzivirira oxide yekupfeka uye yakanyanyisa kuita ngura.
Hunhu: Aluminium inoyevedza Yekupisa uye Magetsi conductor, Yakanaka Corrosion kuramba, Isiri-Magineti uye Isinga-Sparking. Aluminium ndeye 100% inogadziriswazve pasina kurasikirwa nehunhu hwayo. Aluminium inoratidzira yakanaka yeChiedza chinoonekwa uye kupisa.
Mafomu: Huru nhamba yezvinhu zveMotokari, Ndege, Marori, Zvitima. Kavha yekushandisa senge chinwiwa magaba, mapepa. Indasitiri yekuvaka, Wide yakawanda yezvinhu zvemumba, Consumer Electronics, Heat sinks for zvemagetsi zvigadzirwa.
Pedzisa Inowanikwa: Mashini kupera, Kukwesha kupera, Mirror ChiPolish, Brashi polish, Bead Blast (Kupa Matt mameseji ekupedzisa), Anodising, Painting, Powder Coating.
Hurukuro: Aluminium idare rakareruka zvine huremu hunosvika 2.7 g / cm3, inenge chetatu iyo yesimbi. Isu tinoshandisa Aluminium 6061 uye Aluminium 5083 mamakisi emuenzaniso CNC machining.
Kushaya simba: Aluminium idare rakareruka zvine huremu hunosvika 2.7 g / cm3, inenge chetatu iyo yesimbi. Isu tinoshandisa Aluminium 6061 uye Aluminium 5083 mamakisi ekugadzira.
GadziraProto's mhando dzezvinhu: Aluminium 6061 Aluminium 6061-T6 Aluminium 7075
Kuwandisa (g / cm³): 2.7
Kubvisa Mvura (%) __
Tensile Simba (Mpa) __
Elongation pazororo (%) __
Izod inokanganisa Simba Notched (J / m) __
Flexural Simba (MPa) __
Kupisa Kunopisa Temp - 0.46MPa © __
3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Rapid Prototyping, Kukurumidza Prototyping, Cnc Kuchengetedza, Kurumidza Prototyping,